आयो विमल गुरुङको भोइज क्लिप : भने- ‘ममता व्यानर्जीको पापको हाँडी भरियो, घर लुटेर राजनीति नगर’ (अडियोसहित) - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारआयो विमल गुरुङको भोइज क्लिप : भने- ‘ममता व्यानर्जीको पापको हाँडी भरियो, घर लुटेर राजनीति नगर’ (अडियोसहित)
‘हामीलाई अधिकार माग्दा गोली ठोक्यो, घर जलायो, धनसम्पति लुट्यो, आमा, दिदी बहिनासम्मेतलाई बलात्कार गर्छुसम्मको धम्की आइरहेको छ। आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर देश बचाउने जाति हो गोर्खा। तर अहिले त्यही जाति आफूलाई बचाउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको पक्षमा सबै दल, संङ्घसंस्था बोलिदिनुपर्छ, हामीलाई बम पड्कायो, बन्दुक बोक्यो, हतियार बोक्यो भन्ने आरोप छ, तर ममता व्यानर्जीको षडयन्त्र हो। उनी पनि अजम्बरी होइनन्। एकदिन पापको हाँडी फुट्छ, त्यतिबेला? हामीलाई खेदीखेदी, बन्दुक लगाईलगाई राजनीति गर्दैछ। भोलि ममता व्यानर्जीले पनि त्यो भोग्नेछन्। हामीले देश मागेका छैनौं, संवेदनशील क्षेत्र हो पहाड, कुनै पनि विदेशी शक्तिले पहाडमा चलखेल गर्न नपाओस् भनेर राज्य मागेका हौं। देशको सुरक्षाको लागि नै राज्य मागेका हौं। तर अब ममता व्यानर्जी वार्ताको टेबलमा कुरा गर्न आउन पर्छ।’
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले पुलिसले मोर्चा नेता निमा तामाङको घर लुटेको बताएका छन्। उनले सोझै बङ्गालको मुख्यमन्त्रीको नाम लिँदै भनेका छन्, ‘ममता व्यानर्जीको पापको हाँडी भरिँदैछ। माकपा सरकारले 30 वर्ष जुन अत्याचार गऱ्यो ममता व्यानर्जीले त्यो 10 वर्षमा नै गरेकी छन्। ममता व्यानर्जी पनि अजम्बरी होइनन्। पृथ्वी गोलो छ। उनी पापको भागिदार बन्नैपर्छ।’
व्यानर्जीले निमा तामाङको घर कुड्की गर्नु सरासर लुट र अत्याचार मात्र रहेको भन्दै गुरुङले आतङ्क मच्चाएर पहाडको गणतन्त्र खोसेको पनि बताएका छन्। ‘निमा तामाङ जातिको लागि नै भूमिगत छन्। उनी न त देश द्रोही हुन्, न त आतङ्कवादी,’ उनले भनेका छन्, ‘बङ्गाल सरकारले पुलिस लगाएर, बन्दुकले खेदीखेदी जबरजस्ती भूमिगत हुनु बाध्य पारेको हो।’
मुद्दा र जाति बचाउन भूमिगत हुनेहरूको ज्यानमाल नष्ट गर्ने बङ्गाल सरकारको कुटनीति रहेको भन्दै उनले ममता व्यानर्जी अनि विनय तामाङले घर लुटेर राजनीतिक स्वार्थ पुरा गरिरहेको बताएका छन्।
‘त्यो घर जति निमाको हो, त्यतिकै बुहारी र छोराछोरीसमेतको हो। नानीको विस्कुट धरी पुलिसले लग्यो। आफ्नो अधिकार माग्ने निमा तामाङलाई भूमिगत बनायो तर बुहारी र नानीहरूलाई पनि बिल्लिबाँठ बनायो। यो अत्याचार हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यति साह्रो अत्याचार हुँदा पनि के गोर्खा समाज मौन बस्ने त? भोलि आफ्नै ठाउँमा बस्नै नसक्ने स्थिति बनाइरहेको छ। यतिबेला सबै राजनैतिक दल, समाज सङ्घसंस्था बोल्नुपर्छ।’
ममताको सरकारले विमल गुरुङको लाश लिएर आउने पुलिसलाई निर्देश दिएको तर भाग्यवस अहिलेसम्म आफू बाँचेको भन्दै गुरुङले सबै नेताहरू जाति र मुद्दा बँचाउन नै भूमिगत भएको स्पष्ट पनि पारेका छन्। ‘बङ्गालले साह्रै अत्याचार गर्दैछ। भूमिगत नेता, आन्दोलनकारीहरूको घर कुड्की गर्ने, जलाउने, भत्काउने काम गरेर पहाडको गणतन्त्र खोसेको छ,’ उनले अझ भनेका छन्, ‘यतिखेर नै जनता बोल्नुपर्छ। पृथ्वी गोलो छ। सबैले आफ्नो दोषको भागिदारी हुनैपर्छ। अहिले केही मानिसहरूले मेरो पार्टीमा आउज, नआए घर तोड्दिन्छु भन्दैछन्। व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति गर्दैछन्। मानवतासम्म उनीहरूमा छैन। यो त साह्रै अत्याचार भयो, यस्तो हुन जनताले दिनु हुँदैन।’
गुरुङले आफूलाई भागेको नसम्झिदिने भन्दै आफूहरू भूमिगत हुँदा नै मुद्दा र जाति बाँचिरहेको पनि बताएका छन्।
‘जाति, जात, समाजको धरातल नै बिगार्दैछ। यही बिग्रियो भने कोही पनि पहाडमा बाँच्न सक्दैनन्। भूमिगत छु तर जनताकै सेवामा छु। म बाँचेको जनताकै मायाले हो। मैले स्वार्थको राजनीति कहिल्यै गरिन। तर केही मानिसहरूको कारण पहाडको स्थिति बिग्रियो। अहिले सोसल मिडियासम्ममा बोल्न पाइँदैन। पहाडमा गणतन्त्र छैन। बङ्गालले अवहेलित गरेको छ। बाँच्नै गाह्रो स्थिति छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अब कतिदिनसम्म सहने र। कति दिन यसरी जिउने र। जहाँ अधिकार माग्दा गोली दिन्छ। तर जनताले नै गणतन्त्र बँचाउनुपर्छ।’
रामजस्तो आफू 14 वर्ष बनबास नबस्ने भन्दै अहिले विनय तामाङहरूले विमल गुरुङको गुटको भन्दै खेदीखेदी अत्याचार गरिरहेको पनि बताएका छन्। ‘हामीलाई अधिकार माग्दा गोली ठोक्यो, घर जलायो, धनसम्पति लुट्यो, आमा, दिदी बहिनासम्मेतलाई बलात्कार गर्छुसम्मको धम्की आइरहेको छ। आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर देश बचाउने जाति हो गोर्खा। तर अहिले त्यही जाति आफूलाई बचाउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको पक्षमा सबै दल, संङ्घसंस्था बोलिदिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई बम पड्कायो, बन्दुक बोक्यो, हतियार बोक्यो भन्ने आरोप छ, तर ममता व्यानर्जीको षडयन्त्र हो। उनी पनि अजम्बरी होइनन्। एकदिन पापको हाँडी फुट्छ, त्यतिबेला? हामीलाई खेदीखेदी, बन्दुक लगाईलगाई राजनीति गर्दैछ। भोलि ममता व्यानर्जीले पनि त्यो भोग्नेछन्। हामीले देश मागेका छैनौं, संवेदनशील क्षेत्र हो पहाड, कुनै पनि विदेशी शक्तिले पहाडमा चलखेल गर्न नपाओस् भनेर राज्य मागेका हौं। देशको सुरक्षाको लागि नै राज्य मागेका हौं। तर अब ममता व्यानर्जी वार्ताको टेबलमा कुरा गर्न आउन पर्छ।’
उनले शीघ्र वार्तामा टेबलमा कुरा हुनुपर्ने बताउँदै स्पष्ट भनेका छन्, ‘हामीले देशद्रोह गरेका छैनौं। यो विमलको गुटको हो, यसलाई पक्रेर सडाउनुपर्छ भन्ने सोच बन्द गर्नुपर्छ। अहिले बोलेनौं भने भोलि पहाडको स्थिति भयानक बनिनेछ, आज बोलौं, भोलि बाँच्न नसक्ने स्थिति बन्नेछ।’